ထရေးဒင်းသတင်းအချက်အလက်မော်ကွန်းလမ်းညွှန် - အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာ Investing
Expert option လမ်းပြ
Olymp Trade လမ်းပြ
IQ Option လမ်းပြ
Category: - အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သတင်းအချက်အလက်လမ်းညွှန်
သင်ဂရုစိုက်သင့်သည်ကုန်သွယ်မှုမက်ထရစ် ၅ ခု
ဧပြီလ 22, 2021
ကုန်သွယ်ရေးဂျာနယ်တစ်ခုထားရှိခြင်း၏အရေးကြီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၎င်းကုန်သည်များသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၏တန်ဖိုးကိုလျှော့တွက်နေပုံရသည်။ သင်ကောင်းစွာစဉ်းစားသင့်သည့်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်ကိုအာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ဝင်းရာခိုင်နှုန်းဝင်းရာခိုင်နှုန်းသဘောပေါက်နားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာ [... ] ၏မည်မျှထုတ်ဖော်ပြသ
Forex Trading စတင်ရန်ခြေလှမ်းများ
ဧပြီလ 21, 2021
Forex trading သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာလူများသည်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ Forex ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါ, Forex ကုန်သည်များကကုန်သွယ်မှုကိုနေရာချထားရန်အတွက်မည်သည့်ငွေကြေးသည်ကြီးမားသောအတွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်ကိုသိရန်လိုသည်။ Forex အရောင်းအဝယ်သည်အမြတ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး […]
Day Trading အကြောင်းအားလုံး
ဧပြီလ 15, 2021
လူအတော်များများကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်ကူတဲ့ငွေအကြောင်းအိပ်မက်မက်ကြတယ် မကြာသေးမီကကုန်သွယ်ရေး၌ပါ ၀ င်ရန်တစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ ပို၍ စဉ်းစားလာကြသည်။ အတိတ်ကာလ၌, B အတွက်အလုပ်လုပ်သောသူတို့အဘို့သာစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ရရှိနိုင်ပါသည်ig ဘဏ္companiesာရေးကုမ္ပဏီများ။ သို့သော်အင်တာနက်နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုသည်လူတိုင်းအတွက်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ မေးခွန်း […]
ဧပြီလ 8, 2021
ဒီနေ့ဆောင်းပါးကဆုတ်ခွာရန်ဆွေးနွေးထားသည်။ အဲဒါဘာလဲ? ဘယ်လိုအကဲဖြတ်မလဲ၊ ဤမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုသင်အောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဆုတ်ခွာဖော်ပြချက်အရောင်းအဝယ်လောကတွင်ကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်းသည်တိကျသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအထွတ်အထိပ်မှနိမ့်သို့ကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 1, 2021
အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်စဉ်သင်တွေ့နိုင်သောစျေးနှုန်းဇယားအနည်းငယ်ရှိသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဂျပန်မီးခွက်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါအကောင်းဆုံးလား။ Heiken-Ashi လို့ခေါ်တဲ့အခြားမျိုးကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ၊ Heiken-Ashi မီးခုံမီးကဘာလဲ။ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် Heiken-Ashi (သို့မဟုတ် […]
မတ်လ 25, 2021
လောင်းကစားသူ၏မှားယွင်းမှုကဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်မှားယွင်းသောယူဆချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်မှားယွင်းသောထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ စျေးကွက်ကိုသင်အမြဲတမ်းသေချာစွာဆန်းစစ်ပြီးသင်ဇယားတွင်သို့မဟုတ်သင့်စိတ်ထဲတွင်ရှိနေသောထောင်ချောက်များကိုရှောင်ရှားရမည်။ ဒီတော့လောင်းကစားသမားရဲ့မှားယွင်းတဲ့အမှားတွေကဘာလဲ? လောင်းကစားသူ၏မှားယွင်းမှုသည် […]
ရွှေလက်ဝါးကပ်တိုင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မတ်လ 18, 2021
ကုန်သည်များသည်များသောအားဖြင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများမှရရှိသောအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ငွေပေးငွေယူများကိုဖွင့်ကြသည်။ တခါတရံတွင်မီးခုံပုံစံသို့မဟုတ်ညွှန်ပြချက်တစ်ခုသည်ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုကိုလုံလောက်စေသည်။ တခါတရံတွင်ကုန်သည်များသည်အနည်းငယ်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြသည်။ ရွှေလက်ဝါးကပ်တိုင်ဟုခေါ်သောယနေ့မဟာဗျူဟာသည်ရွေ့လျားနေသောပျမ်းမျှနှစ်ခုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည် […] ၏ရွှေရောင်နည်းလမ်းတစ်ခုလော။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင်လျှော့ချသည့်အယူအဆဆိုသည်မှာငွေကြေး၊ လုံခြုံရေး၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအတွက်တောင်းခံခြင်းနှင့်လေလံဆွဲခြင်းတို့၏ကွာခြားချက်ကိုဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်၎င်းသည်ရောင်းသူများကသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ ယ်သူများဝယ်ယူသောငွေပမာဏအကြားကွာဟမှုကိုလျှော့ချခြင်းကိုသင်္ကေတဖြစ်စေသည်။
မတ်လ 4, 2021
ဤသည်မှာကုန်သည်တစ် ဦး အတွက်အကြီးမားဆုံးနှင့်သြဇာအရှိဆုံးကုမ္ပဏီများကိုသိရန်မငြင်းနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ စတော့ဈေးကွက်တစ်ခုလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဤကုမ္ပဏီများကမောင်းနှင်သည်။ ၎င်းတို့ကို FAANG ကုမ္ပဏီများဟုလူသိများသည်။ FAANG စတော့ရှယ်ယာဆိုတာဘာလဲ။ FAANG ကုမ္ပဏီများသည် […] ၏စွမ်းဆောင်ရည်တွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သူများဖြစ်သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2021
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားငြင်းခုံဖွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည်။ ဤအကြောင်းအရာကိုသို့သော်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားသင့်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ပုံစံကိုလမ်းတစ်လျှောက်လာရောက်ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့စစ်မှန်သောသုတေသနနှင့်သက်သေအထောက်အထားကိုလေ့လာဖို့ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားကုန်သွယ်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ပတ်သက်။ နှစ်ခုလိင်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိမရှိထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည်။ […] လွှမ်းမိုးသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ
Sitemap - သုံးသပ်ချက်များ
Sitemap - ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ
© Copyright 2019 All Rights Reserved ။ Investingstockonline.com
ဒီ website သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့သင်ဤအတူအိုကေပါပဲယူဆပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကရွေးချယ်ထွက်နိုင်ပါတယ်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်။ cookie settings ကိုလက်ခံ
သီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookies တွေကိုပေါ်လစီ
ဒီ website ကိုသင်က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်သွားလာနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြုပြင်ဘို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဤ cookies များကိုထဲကလိုအပ်သောအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်သော cookies များကိုသင်၏ browser ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားသည်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်သင်ဤ website ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့နားလည်ကူညီ Third-party cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ ဤရွေ့ကား cookies များကိုသာသင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ browser ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းဤအကွတ်ကီးများထဲကရွေးချယ်ဖို့ option ကိုရှိသည်။ သို့သော်ဤ cookies များကိုတချို့၏ထွက်ဝင်ရောက်ခြင်းသင့်အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံအားတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။